Obere obodo nke ụwa | Njem akụkọ
obodo dị iche iche nke ụwa
Mariela Carril | 17/05/2022 17:00 | Emelitere ka 18/05/2022 15:29 | Obodo, Nduzi
Ụwa nwere ebe mara mma na ebe dị iche iche. Enwere ihe niile. Na Actualidad Viajes, anyị na-ekwukarị maka ebe ndị mara mma, mara mma n'ihi akụkọ ihe mere eme ha ma ọ bụ ọdịdị ha, mana enwerekwa ebe ndị ama ama ma ọ bụ ndị amabeghị.
Taa, obodo dị iche iche n'ụwa
1 Coober Pedy, Australia
4 Manshiyat Nasser, Egypt
5 Obodo Dwarf, China
6 Kowloon, Họng Kọng
8 Hallstatt, China
9 Federation nke Damanhur, Italy
11 Longyearbyen, Norway
Este obodo Australia ọ bụ obodo kpamkpam n'okpuruala. E wuru ya na mmalite nke narị afọ nke XNUMX, na 1915dị ka a Ngwuputa obodo raara nye mputa nke opals. N'oge na-adịghị anya ndị na-egwuputa ihe chọpụtara na ọ dị mfe ma dị mfe ịnọ n'okpuru ala, karịsịa n'oge okpomọkụ mgbe okpomọkụ dị n'elu nwere ike iru 51ºC.
CobberPedy o nwere veranda, ụlọ ahịa na ụka na taa, ọbụna a 4 star hotel.
Ọ bụ agwaetiti mgbawa ugwu, nke nwere ugwu mgbawa na-arụ ọrụ, ya mere ọ na-abụkarị ndị bi na ya na-ebu ihe mkpuchi gas gaa ebe ha na-aga. Ọbụna sirens na-ada ụda mgbe niile na-agwa ha ka ha gaa nweta ihe mkpuchi ha n'ihi na fumaroles amalitela ịchụpụ gas na-egbu egbu.
Mgbawa kacha njọ bụ n’afọ 2000, bụ́ mgbe ugwu mgbawa ahụ si n’ihe dị ka puku tọn 10 na puku tọn 20 kpọpụta sọlfọ dioxide, n’ihi ya, ndị mmadụ aghaghị isi n’àgwàetiti ahụ pụọ ná nnukwu ebe mgbapụ.
Ị hụtụla a obodo na-acha anụnụ anụnụ? Obodo nta a bụ ugwu Moroko na ihe niile, okporo ámá na ụlọ, na-acha anụnụ anụnụ. Otu a ka ndị Juu bi na narị afọ iri atọ si ese ya.
Taa, obodo ahụ nwere ihe dị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ 200 na-enweta ndị njem nleta na Europe ma na-ekwu na ọ bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na Morocco. hashish.
Manshiyat Nasser, Egypt
Obodo a bụ n'ezie ihe mkpuchi ihe mkpofu na nke ahụ mere ya nnọọ n'ihi na ọ nọ nso Cairo, isi obodo mba ahụ. Isi obodo enweghị usoro dị mma iji dozie ihe mkpofu ya na ya mere ihe niile na-ejedebe ebe a, Ndị na-anakọta ihe mkpofu na-akwadoghị, baptizim. zabbaleen, ha na-ejedebe na-ebute ibu ha ebe a.
Obodo Dwarf, China
Ọ bụ obere obodo ndị China nọ na ya Ndị mmadụ 120 bi na-enweghị ike ịtụ ihe karịrị 1 mita, 30 centimeters. Ndị dwarfs China wuru obodo a ka ha gbanarị ịkpa oke na ruo taa, ha nwere ọbụna ndị uwe ojii na ngalaba mgbanyụ ọkụ nke ha.
Iji nweta ego nke onwe ha, ndị bi na ya kpebiri iwu ụlọ ha nwere ọdịdị pụrụ iche na, n'ụzọ dị otú a, mee ka obodo ahụ ghọọ ebe nkiri njem nleta na a. ogige isiokwu bi
Kowloon, Họng Kọng
Ị na-ele foto ndị a anya ma ị gaghị ekweta na e nwere ndị mmadụ bi ebe a. E bibiri Kowloon na 1994 na ọ bụ obodo kacha nwee ndị mmadụ n'ụwa niile ihe dị ka puku mmadụ 500 bi na mbara hectare abụọ na ọkara.
kowloon Ndị agha China wuru ya na narị afọ nke XNUMX, dị ka akụkụ nke a Fort na mgbe ọ gbahapụrụ ya na 50s. Ya mere ndị mafia ndị China weghaara ya na ndị otu ha, ndị atọ a ma ama. Na-enweghị ezigbo ọchịchị ma ọ bụ ụkpụrụ, ndị bi na ya wuru ụlọ ha otu n'elu ibe ya. Nchekwa pụtara ìhè site na enweghị ya.
N'obodo a naanị mmadụ 35 bi, mana enwere 350 ụmụ bebi na ụmụ bebi n'ụdị mmadụ. Ha bụ ọrụ onye na-ese ihe Ayano Tsukimi, otu nwanyị nke dị ihe dị ka afọ 70 ugbu a, bụ onye chepụtara echiche nke iji ụmụ bebi na ụmụ bebi ndị a na-ejupụta n'obodo ahụ mgbe ezigbo ndị mmadụ malitere ibelata na ndị mmadụ malitere inwe mmetụta nke owu ọmụma.
Dolmụ bebi ndị a na-anọchi anya ezigbo ndị mmadụ na ọrụ ha, ma ọ bụ ọrụ ndị ha na-enwebu. Ị nwere ike ilele akwụkwọ akụkọ, Ndagwurugwu nke Dolls, Ebe ị nwere ike ịhụ ndụ onye na-ese ihe na usoro mmepụta nke ụmụ bebi ndị a.
Ndị China nwere aha ọma maka ịbụ ezigbo ndị na-edepụta ihe, yabụ kama iṅomi akpa aka ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ n'oge a ha ebipụtala otu obodo dum: Hallstatt, n'Austria. Edepụtaghachiri obodo Austria a kpam kpam, gbadata na nkọwa kacha nta.
Owuwu malitere na 2012, aka na ụlọ ọrụ na-egwupụta akụ nke China, bụ ụlọ mbụ na-ebuli ụlọ ụka mara mma nke a na-ahụ na ihe oyiyi ọ bụla nke obodo Austrian.
Federation nke Damanhur, Italy
Obodo a amuru na 1975, mgbe Oberto Airaudi na ndị enyi ya kpụrụ a gburugburu ebe obibi na ime mmụọ na mpaghara Piemonte, na ugwu nke mba ahụ. Taa mmadụ 600 na-ebi ma a na-ewere ya dị ka Laboratory maka ọdịnihu nke mmadụ.
ebea ndi mmadu bi na ya ụlọ obodo n'etiti 10 na 30 mmadụ. Ndụ na-ekekọrịta kpamkpam, ọ nwere ego nke ya, kredit, ma nata njem nlegharị anya na-achọsi ike. N'ihi ụzọ ndụ, kamakwa n'ihi ihe owuwu ya, ụfọdụ wuru n'okpuru ala.
Obodo a na-arụ ọrụ n'otu ụlọ. Otú ahụ ka ọ dị! Ụlọ nke 14 ala, ọ bụbu ogige ndị agha. Taa ka a maara saịtị ahụ dị ka ọnụ ụzọ Prince William Sound, ihe na-adọrọ mmasị maka ndị obodo na ndị njem nleta na-abịa Alaska na-achọ ihe omume okike.
Whittier nwere 200 bi ndị niile bi n'okpuru otu ụlọ nke gụnyere ụlọ ọrụ uwe ojii, ọdụ mmanụ ụgbọala, ụlọ ụka na n'oge ahụ ụlọ ahịa mgbazinye vidiyo. A na-akpọ ụlọ ahụ dum Begich Towers na nwere naanị otu ntinye/mmepụta nke na-emepe ugboro abụọ n'otu awa, na-emechi n'abalị ma meghee ọzọ n'echi ya.
Oge okpomọkụ ọ bụla, Whittier na-enweta awa 22 nke ìhè anyanwụ na n'oge oyi enwere nnukwu snow nke na ọ bụ ihe ịtụnanya. O nwere ụlọ mbikọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke na-ele anya n'oké osimiri.
obodo oyi, obodo ebe ndị nwụrụ anwụ na-ajụ oyi ruo mgbe ebighị ebi na-agbajighị. Nke ahụ ziri ezi, ebe ahụ dị n'ebe ugwu nke na oyi na-atụ dị egwu, na mgbakwunye na ọnọdụ ya kwa afọ anyanwụ anaghị apụta ọnwa anọ. malite n’October ruo March, ruo mgbe ọ ga-alọghachi n’ebube ka mmadụ nile nabata ya n’ememme a ma ama nke a na-akpọ Solfestuka.
Yabụ, otu n'ime ihe kacha atọ ụtọ gbasara obodo Norway a bụ isiokwu ọnwụ. Afọ 70 gara aga, ebe a na-eli ozu obodo kwụsịrị ịnata ozu, yabụ a na-ajụ ndị bi na ọ bụrụ na ha anwụọ n'obodo, a ga-eji ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ elu bufee ozu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » obodo dị iche iche nke ụwa
Ụlọ ndị Rom na Spain
Ụzọ mgbapụ kacha mma iji nụ ụtọ njem nlegharị anya ugwu